एन्टिसाइक्लोन र आँधीबेहरी बीच के भिन्नता छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
एन्टिसाइक्लोन (A) र स्क्वल (B) बीचको भिन्नता
आँधीबेहरी र एन्टिसाइक्लोनले वातावरणको विभिन्न चापहरूलाई दर्शाउँछ। वायुमंडलीय दबाव मिलिबार (mbar) मा मापन गरिएको छ। एक मिलीबार १ बारको एक हजारौं बराबर हो, र एक पट्टी १ वातावरण (एटीएम) बराबर हुन्छ। मिलिबारको अर्थ के हो भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकी एक क्षेत्रमा कम वा कम मिलीबारको भिन्नताले आँधीबेहरी र एन्टिसाइक्लोनहरू सिर्जना गर्दछ।
विवरणमा जानु अघि एन्टिसाइक्लोन र आँधीबेहरी सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिन्छ नक्सामा आइसोबारहरूलाई ध्यानमा राख्दै। यदि सामान्य भन्दा बढी दबाव छ भने, उदाहरणका लागि १०२1024 mb, यो जब हामी एन्टिसाइक्लोनको कुरा गर्छौं. जब दबाव कम हुन्छ, उदाहरणका लागि 996 XNUMX मिलीबार, छविमा देखा पर्दा, हामी आँधीबेहरीको बारेमा कुरा गर्छौं। यहाँबाट, विभिन्न दबावहरूसँग सम्बन्धित मौसम फरक छ।
सामान्यतया हामी यसलाई स्थिर समयसँग तुलना गर्न सक्छौं, एक स्पष्ट आकाश र सूर्य संग। यसको दबाब लगभग १०१1016 मिलिबार वा अधिकबाट हुन्छ.
एन्टिसाइक्लोन मा हावा यसको वरिपरिको हावा भन्दा धेरै स्थिर छ। फलस्वरूप, हावा वायुमण्डलबाट तल झर्दछ, घटनालाई "सब्सिडेन्स" भनेर चिनिन्छ। यस प्रकारको अनुमोदनले वर्षाको गठन रोक्दछ। हावा अवतरण गर्ने तरिका हामी जहाँ छौं गोलार्ध अनुसार भिन्न हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा, यो घडीको दिशामा तल झर्दछ। र दक्षिणी गोलार्द्धमा, यसको विपरित।
एन्टिसाइक्लोनको विपरीत, अस्थिर मौसमसँग सम्बन्धित छ, बादल बादल र वर्षा। यसको दबाव १०१1016 मिलिबार भन्दा कम छ।
आँधीमा हावाको परिक्रमणको दिशा, जुन यस अवस्थामा माथितिर उठ्छ, एन्टिसाइक्लोनको विपरीत दिशामा गर्दछ। त्यो दक्षिणी गोलार्धको लागि घडीको दिशा र उत्तरी गोलार्धको लागि काउंटरक्लवाइज हो।
तिनीहरू सामान्यतया हावाहरू ल्याउँछन्, र तापक्रम कम गर्दछगर्मी र जाडो दुबैमा। यो सामान्यतया कम सौर्य किरणहरूको प्रवेशको कारण देखा पर्दछ, किनकि बादलले तिनीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, तिनीहरूलाई बग्नबाट रोक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » एन्टिसाइक्लोन र आँधीबेहरी बीच के भिन्नता छ?
शताब्दीको अन्तसम्म तापक्रम २ र2डिग्रीले बढ्न सक्छ